Home / Blog / Mihetsiketsika indray ny onja mangatsiaka! Vokatra amin'ny fandroana, Ahoana no hisorohana ny hatsiaka?
2021 / 04 / 11 FisokajianaBlog 6006 0
Lohateny amin'ny efitrano fandroana
Nisy onja mbola tsy nilatsaka, nanomboka onja indray, rivotra mangatsiaka mahery hiverina!
Lasa mangatsiaka ny andro, ankoatry ny tokony hijeren'ny olona ny hafanana sy ny hanampiana akanjo, ny fanadiovana ara-pidiovana ao an-trano ihany koa no tokony ho fanoherana lehibe indrindra. Rano latsaka ny -4 degre Celsius, nivelatra ny volan'ny ranomandry, mitarika mora foana amin'ny vokatra fanadiovana ao anaty ny fanitarana ny ranomandry sy rano ary miakatra ny vokatra mitresaka. Alefako aminao ireo torohevitra momba ny fanoherana ny hatsiaka!
Toeram-pidiovana amin'ny ririnina mba hisorohana ny fitandremana ny hatsiaka sy ny famakiana
Amin'ny ririnina, ny varavarana sy ny varavarankely amin'ny fandroana dia mihidy vonjimaika mba hampijanona ny rivotra ary hitazona ny mari-pana anatiny. Mba hisorohana ny hatsiaka dia avelao azafady ny rano sisa tavela rehefa tsy ampiasaina ny trano fidiovana.
Ireto ny fomba sy ny dingana: manidy ny vavahady fidirana, esory ary esory ny bolt drainage, ary hamafino ny fantson-drano aorian'ny famoahana ny rano sisa tavela, raha tsy izany dia hiteraka fivoahan'ny rano.
Hisy ny rano amin'ny fantsona any ambadiky ny kabine. Mampiasà lamba sponjy sy paompy hitrohana ny rano mba tsy hanamontsana sy hamaky lava ny kabine.
Ho fanampin'izany, azonao atao ny mandraraka antifreeze ao anaty fitoeran-drano, na ao anaty rano amin'ny alikaola, sira, afaka mampihena ny rano mangatsiaka, nefa koa manohitra ny hatsiaka. Raha misokatra amin'ny rafitry ny fanafanana ny trano fidiovana, ary afaka miantoka fa tsy hangatsiaka ny trano fidiovana dia tsy afaka manampy antifreeze ao amin'ny trano fidiovana ianao.
Fitandremana fikojakojana ny filentehan'ny ririnina
Avy hatrany aorian'ny fampiasana azy dia ataovy maina amin'ny lamba maina mba hisorohana ny vaky tampoka ateraky ny ranomandry. Rehefa manadio dia aza mampiasa vy fanadiovana vy hialana amin'ny fikororohana ny tampon'ilay fantsakana. Raha misy maripana ambany dia ambany dia azonao atao ny misafidy ny manarona ny labozia amin'ny lamba misarona azy mba tsy ho simba noho ny hafanana ambany.
Fitandremana fikojakojana kovetabe fandroana amin'ny ririnina
Voalohany indrindra, isaky ny ampiasaina ny koveta fandroana, tazomy ho maina ny koveta fandroana, mba tsy hiteraka fihoaran'ny rano maharitra na tsy hiseho ary tsy azo ampiasaina. Amin'ny fotoan'ny fanadiovana dia aza mampiasa asidra mahery sy mpanadio alkaly hisorohana ny harafesin'ny faritra fandroana. Hamafa amin'ny lamba malefaka mba tsy hiteraka korontana, ary raha sendra misy ratra kely tsy nahy dia diovy diovina avy hatrany ny tampon-tany mba hamerenana ny laoniny. Aza asiana zavatra vy eo ambonin'ny vata fandroana mba hisorohana ny fahasosorana na ny fahasimban'ny tampon'ilay koveta fandroana, ny fiatraikany amin'ny hatsarany sy ny maha-azo ampiharina azy.
Fitandremana fikojakojana ny kabinetra amin'ny ririnina
Ao amin'ny efitra fandroana aorian'ny fisasana dia tokony ho eo ambonin'ny kabine amin'ny fandroana amin'ny fandroana amin'ny rano madio madio tsara. Ny kabine fandroana dia matetika apetraka amin'ny savony, fanasana tarehy, shampooing ary kojakoja fanadiovana hafa, raha sendra tsy mandeha any ivelany, dia tsara kokoa ny manadio avy hatrany, ny entana mavesatra no tokony hapetraka ao ambanin'ny vata fidiovana. Rehefa manadio ny kabinetra ao amin'ny fandroana dia aza mampiasa tariby vy, lamba Pasteur, fikosehana simika mahery, ary aza mampiasa rano hisorohana ny loto. Ampiasao tsara ny mpanadio tsy miandany ary ny fikojakojana ireo vokatra matihanina.
Fampitandremana manapotipotika ny faucet amin'ny ririnina
(1) antony mitresaka fanala.
0 ℃ ambanin'ny fampiasana ny tontolo iainana, ao anatin'izany fa tsy ferana amin'ireo antony manaraka ireo.
1, aorian'ny fitsapana mialoha ny rano ny tetikasa dia tsy hovonoina ny fantsona ao anaty rano sisa tavela.
2, fametrahana fantsona any ivelany, tsy manidy ny vavahady fidiran'ny rano, ary tsy nanao fiarovana fanoherana ny hatsiaka.
3, ny tompony dia miala sasatra amin'ny fialan-tsasatra na tsy trano onenana maharitra, tsy nafanaina ny efitrano, tsy nanidy ny vavahady hidiran'ny rano handemana ny rano sisa tavela amin'ny faucet. Vitan'ny tompony ny fanavaozana ny rivotra miditra amin'ny efi-trano, tsy nikatona ny varavarankely tamin'ny alina, ary ny vavahady hidiran'ny rano tsy nikatona mba hamoahana ny rano sisa tavela ao anaty faucet.
(2) Ahoana ny fomba hisorohana ny fepetra.
0 ℃ ambanin'ny fampiasana ny tontolo iainana, ao anatin'izany fa tsy ferana amin'ny fepetra manaraka.
1, ny mari-pahaizana momba ny tontolo iainana fametrahana fantsom-panafody toy ny ambanin'ny 0 ℃, asaina tsy hametraka vonjimaika na apetraka amin'ny rano tsy maharitra, na fitsapana rano aorian'ny fivoahana tsara ny rano fantsona.
2, amin'ny alina dia tokony hanidy ny varavarankely an-dakozia, ny fandroana any ivelany ary koa ny efitrano misy alokaloka any aoriana mba hahazoana antoka fa mihoatra ny 0 temperature ny mari-pana anatiny.
3, ho an'ny efitrano misy ny mari-pana anatiny ambany ambany 0 ℃, akatona ny valizy mitafo rano ao anaty ary farano hamoaka ny rano sisa tavela ao anaty fantsona.
4, ny mari-pana anatiny dia ambany noho ny efitrano 0 ℃, mila manokatra ny fanafanana, mitazona ny mari-pana mihoatra ny 0 ℃.
5, azonao atao ny mampiasa lamba landihazo sy rongony, akanjo landihazo taloha, volon'ondry sy fitaovana insulation hafa hanamafisana sy hamonosana faucet henjana.
Previous :: Mametraka talantalana eo amin'ny trano fidiovana, miaina 5 metatra toradroa avy hatrany ny fandroana! Next: Ny efitrano fandroana ao an-trano, misafidy ny trano fidiovana amin'ny rindrina? Sa trano fidiovana gorodona?
2021 / 04 / 22 3780
2021 / 04 / 12 6678
2021 / 04 / 12 5609